मनोरंजन – Sandesh Press
May282022 by Usha Lama AdminNo Comments
काठमाडौँ– रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘कबड्डी ४ द फाइनल म्याच’ ले ओपनिङमै कीर्तिमान रचेको छ । नेपाली चलचित्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ओपनिङका साथ यस चलचित्रले कीर्तिमान बनाएको हो । यो चलचित्रले क्यूएफएक्समा १०५ शो र बिग मुभिजमा १७ शो प्राप्त गरेको छ । जुन अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली वा विदेशी चलचित्रले यति धेरै शो प्राप्त गरेका छैनन् । पहिलो दिन कबड्डी ४ ले पूर्ण अकुपेन्सीका साथ व्यापारको नयाँ कीर्तिमान रच्न सफल भएको छ । चलचित्रले पहिलो दिन सबैभन्दा ठूलो व्यापार गर्ने रेकर्ड बनाएको फिल्मका निर्देशक रामबाबु गुरुङ र वितरक गोविन्द शाहीले दाबी गरेका छन् । फिल्मले पहिलो दिनमै साढे तीन करोडको व्यापार गरेको जानकारी दिइएको छ । यसअघि सर्वाधिक व्यापारको कीर्तिमान दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘केजिएफ २’ ले राखेको थियो । उक्त चलचित्रले पहिलो दिन दुई करोड हाराहारी कलेक्सन गरेको थियो
मनोरञ्जनको रङ्गिन दुनियाँमा असल मित्र भेट्न कठिन छ । भेटिहाले पनि विश्वास र भरोसा गर्न कठिन ।एक–अर्कालाई होच्याउने, पछाडिबाट खुट्टा तान्ने कारण पनि सहजै कसैले कसैलाई विश्वास गर्दैनन् । दोस्ती लुक्ला बरु, दुश्मनी किन लुक्थ्यो !हुन त कलाकारहरु दोहोरो चरित्र निभाउन खुबै जान्दछन् । दोस्ती क्षणिक भएपनि दुश्मनीको अवधि लामै रहन्छ । पूजा शर्मा र सुष्मा कार्की कलाकार पूजा शर्मा र सुष्मा कार्कीले पनि एक समय दुश्मनी खुब निभाए, अहिले पनि उनीहरु एक–अर्कासँग बोल्दैनन् । एक जना स्थापित निर्देशकका कारण उनीहरुबीच दुश्मनी पैदा भएको बताइन्छ ।एक समय ती निर्देशक र सुष्मा जोडीका रुपमा चिनिन्थे । उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको सुष्माले यसअघि नै स्वीकारि सकेकी छिन् । निर्देशकले सुष्मा छोडेर पूजा रोजेपछि उनीहरु एक–अर्काको दुश्मन बनेका हुन् । अहिले उनीहरु खुलेआम एक–अर्काको विरोध गर्छन्। अहिले पनि सार्वजनिक क
May242022 by Usha Lama AdminNo Comments
पछिल्लो समय टिकटकमा बच्चा तन्नेरीदेखि उमेर ढल्किएका सम्म झुम्मिने गर्छन् । टिकटकमा दिनहुँ नयाँ नयाँ ब्यक्ती भाइरल हुनेगर्छन् । कोही टिकटककै कारण स्टार समेत भइरहेका छन । यसैक्रममा एक हट मोडल बनि टिकटकमा भाइरल बनिरहेकी छन् । उनको असाध्यै बोल्ड अवतारले समाजिक संजाल तताइरहेको छ । उनको नाम शायोमा लिम्बु हो । उनले बनाएका निकै बोल्ड टिकटकले तहल्का नै मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै उनका बोल्ड तस्बिरले सामाजिक संजालमा तरंग नै ल्याएको छ । हेराैँ उनका निकै हट अवतारहरू टिकटकमा भाइरल हुने मन छ ? यसो गर्नुहोस् टिकटकप्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण दिनप्रति बढ्दो छ । छोटो भिडिओ शेयर गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा परिचित टिकटक सन् २०२१ मा धेरै डाउनलोड हुने मोबाइल एपसमेत हो । यतिमात्रै होइन गुगल र फेसबुकलाई पछि पार्दै धेरै हेरिने वेबसाइटमा समेत टिकटक उक्लिन सफल भएको छ । केही देशमा
May192022 by Usha Lama AdminNo Comments
म कामी हो,अभिनेत्री निरुता सिंह भन्छिन्ः मेरो जातमा मलाई गर्व छ
पालकी चर्चित अभिनेत्री निरुता सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यतिबेला नेपालमा नयाँ बहस खडा गरिदिएको छ।उनले अझै पनि नेपालमा जातिय विभेद अन्त्य नभएको बताएकी हुन्। उनले नेपालका शहरी क्षेत्रमा केही हदसम्म जातीय विभेद अन्त्य भएता पनि साना गाउँघरमा र ठूला शहरमै पनि विभेदको अन्त्य हुन नसकेको बताएकी छिन्। उनले आफ्नो जातिप्रति गर्व गर्नुपर्ने पनि बताउँछिन्। उनले आफू विश्वकर्मा भएको र आफू कामी जातमै खुशी भएको उल्लेख गरिन्। आफ्नो अनुभव सुनाउँदै निरुता भन्छिन्,‘हामी शहरमा बस्छौँ, ठूलठूला कुरा गर्छौँ तर आज पनि गाउँघरमा र शहरमा पनि जातिय विभेद छ। अब निरुता, सिंह भनेको के हो? तपाई ठकुरी हो? भनेर सोध्छन् मलाई। हैन विश्वकर्मा हो भन्छु म। म गर्वसँग भन्छु म विश्वकर्मा हो, म कामी हो।’
May122022 by Usha Lama AdminNo Comments
फ्यानहरु`लाई सर`प्राइज दिँदै गायक स्वप्न सुमनले दुई दिन`अघि आफ्नी प्रेमिका ज्योत्सना योगीसँग लगनगाँठो कसे । कमलपोखरीको एउटा होटलमा आयो`जित सानो समारोहमा परम्प|रागत तवरबाट उनीहरुले लगन`गाँठो कसेका थिए । ४ वर्षदेखि रिले`सनसीपमा रहे पनि उनीहरु सार्वजनिक`रुपमा खुलेका थिएनन् । स्वप्न सुमनले एका`एक विवाहको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि उनका धेरै लेडी फ्यान`हरु जिल्लिए । खैर, यी गायक`लाई अहिले बधाई र शुभ`कामना सन्देश लिन भ्याइ`नभ्याइ छ । युवायुवतीहरु`माझ अत्यधिक क्रे`ज भएका गायक हुन् स्वप्न सुमन । युट्यूवबाट चर्चामा आएका उनले छोटो समयमा लोभ`लाग्दो फ्यान फ`लोइङ कमाए ।स्वप्नको ‘कसरी भनुँ’ बोलको गीत सर्वाधिक हिट छ । ५ वर्षअघि युट्यूवमा रिलिज भएको यो गीतको लिरिकल भिडियोले अविश्वसनीयरुपमा ५ करोड २० लाख भ्यूज बटुलेको छ । कुनै पनि नेपाली गीतको लिरिकल भिडि`योले पाएको सम्भ`वत यो सर्वा|धिक भ्युज
हिन्दी फिल्म उचाई को छायाँ`कनका लागि नेपाल आएका बलिउड अभिनेता अनुपम खेरले काठ`माडौको पशुपती मन्दीर क्षेत्रमा एक भारतीय किशोरी भेटे ।उचाइको छायाँक`नका लागि खेर लगायतका भारतीय कलाकारको टोली नेपाल आएको थियो । नेपालका विभिन्न ठाउँमा उनी`हरूको टोलीले छायाँकन गर्‍यो। यसबीच अनुपम खेरले नेपालमा एक भारतीय किशोरीलाई पढाइको जिम्मा लिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो कुराको जानकारी गराएका छने । नेपालमा रहँदा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा निकै सक्रिय रहेका उनले विभिन्न ठाउँमा भेटेका व्यक्ति`हरूसँग कुरा`कानी गरेका, केटाकेटीलाई आफ्नी आमाले बुनेका स्विटर बाँडेको जस्ता केही भिडिओ सेयर पनि गरेका थिए। अनुपम खेरले सोध्छन्, तिमी कहाँबाट आएकी हौ ? आरती भन्छिन्, म भारतको राजस्थान`बाट आएकी हुँ। यत्तिको राम्रो अंग्रेजी कसरी बोल्न आयो ? अनुपम खेर सोध्छन्।आरती`ले धन्यवाद भन्दै आफू मागेर जीविका चलाउने र कहिल्यै
May112022 by Usha Lama AdminNo Comments
अभिनेत्री रेखा थापाले दोस्रो विवाह गरेकी छिन् । बलराम शाही ठकुरीसँग कोर्ट म्यारिज गरेकी हुन् । निर्माता छविराज ओझासँग छुट्टिएको लामो समयपछि रेखाले ठकुरीलाई जीवनसाथी रोजेकी हुन् । रेखा पछिल्लो समय राजनीतिक दलको नेतृको रुपमा चिनिएकी छन् । नेपाली समाजमा पहिले एकपटक विवाह गरेपछि वा श्रीमान्को निधनपछि एकल महिलाको रुपमा जीवन व्यतित गर्ने चलन रहिआएको थियो । पछिल्लो समय भने श्रीमान् वा श्रीमतीको निधनपछि या पहिलो विवाह असफल भएर डिभोर्स भएपछि महिला, पुरुष एकल बस्ने चलन बिस्तारै हराउँदै गएको छ । नेपाली कला क्षेत्रका धेरै कलाकारले अर्काे जीवनसाथी रोजेका छन् । रञ्जना शर्मा अभिनेत्री शर्माले अमेरिकी निवासी निकेश सिलवालसँग दोस्रो विवाह गरेकी छन् । निर्देशक श्याम भट्टराईसँग डिभोर्सपछि उनले सिलवाललाई जीवनसाथी रोजेकी हुन् । सिलवाल र शर्मा हाल अमेरिकामै छन् । श्वेता खड्का अभिनेत्री खड्काको
यो बर्षको सुरुवात संगै धमाधम नायिकाहरुको बिबाह भैरहेको छ । तर सबै गुपचुपमा । यतिसम्मकी बिबाहको तस्बिरहरु उनै नायिकाहरुले शेयर गरेपछी मात्र फ्यानहरुले थाहा पाए । १. रेखा थापा – अभिनेत्री रेखा थापाले बिबाह गरेकी छिन । रेखाले जाजरकोट स्थायी घर भएका बलराम शाहीसँग विवाह गरेकी हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार अघिल्लो साता उनीहरुले कानुनी बिबाह गरेका हुन् । बुझ्नमा आए अनुसार बलराम शाही लामो समयदेखि इजरायलमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । केही समय देखि रेखा र बलराम प्रेममा थिए । रेखाले अर्को वर्षको शरुमै बिहे गर्ने संकेत यसअघि नै गरेकी थिइन । त्यसो त बलराम पर्यटन व्यवसायी भएका जनाइएको छ । २. केकी अधिकारी – अभिनेत्री केकी अधिकारीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छन् । काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी भिल्ला अपार्टमेन्टमा उनले विवाह गरेकी हुन् । परिवारका सदस्य र निकट आफन्त तथा साथीहरुको उप
काठमाडौं – आफ्नै मामा स्व. दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’वाट फिचर फिल्ममा प्रवेश गरेका हमालले पहिलो चलचित्रबाटै अत्याधिक चर्चा पाए।अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि भारतबाट प्रकासित फेशन नेट म्यागजिनमा उनले फोटो शेसन गरेका थिए भने काठमाडौमा सम्पन्न केहि फेशन शोमा र्‍याम्प मोडलिङ समेत गरेका थिए। १७० बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका हमाल पछिल्लो समय अभिनयमा त्यति सक्रिय छैनन्। एक समयका सर्वाधिक चर्चित नायक मानिने हमालका तारिफ पाउने खालका चलचित्र सार्‍है थोरै छन्। केही महिलाहरुसँग उनको नाम जोडिएपनि उनको प्रेमप्रसंगको चर्चा त्यति भएन। ५० वर्षको उमेरमा उनले मोडल मधु भट्टराईसँग प्रेमविवाह गरेका थिए।सानैबाट सुख सयलमा हुर्केका हमाल खासै पैसाको उनले दुख गर्नु पर्ने अवस्था थिएन। किनकि उनी राम्रो आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा थिए। पहिला वर्षमा एक पटक घुम्नलाइ अमेरिका र बेलायत जाने हमल अहिले भने
May92022 by Usha Lama AdminNo Comments
चर्चित युटुब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा दुई महिनादेखि कुनै पनि भिडियो प्रसरण भएको छैन ।शिशिर भण्डारीको लोकप्रिय यस च्यानलमा किन भिडियो आएन ? यसका सन्चालक कलाकार तथा सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी कहाँ हराए ? शिशिरलाई हिजो आज सामाजिक सन्जालमा यस्तै प्रश्नहरु आउने गर्दछन् । वास्तवमा शिशिर यतिबेला अष्ट्रेलियामा छन् । उनी एक साँगितिक कार्यक्रमका लागि मार्च १८ मा अष्ट्रेलियामा गएका थिए । त्यसपछि कार्यक्रमहरुको चाप बढेपछि बिगत ४५ दिनभन्दा बढि देखि उनी उतै छन् । शिशिर यहि मे १९ मा नेपाल फर्कदैछन् । यसैबिच अष्ट्रेलियाबाट शिशिरको एउटा फोटो बाहिरियो । जुन फोटोमा शिरि बाटोमा बसेर डलर माग्दै गरेको अवस्थामा देखिन्थे । उनलाई त्यो फोटो र भिडियोलाई लिएर पनि धेरैले प्रश्न गरे । वास्तवमा यो फोटो र भिडियोको वास्तविकता अर्कै थियो । शिशिर अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको समसामयिक कथामा आधारित सर्ट फिल्म